साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव
on: April 14, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भएको बेरुजूमध्ये रू. ३५ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयबाट मात्र रू. ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रका सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्दा आव २०७४/७५ मा रू. १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ लाख बेरुजू भएको देखाएको छ । त्यसअनुसार कुल बेरुजूमध्ये २५ दशमलव १५ प्रतिशत रकम सम्बद्ध सरकारी निकायले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश तहका सरकारी कार्यालयबाट रू. २ करोड ११ लाख र स्थानीय तहबाट रू. २ अर्ब ७२ करोड १६ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखा परीक्षकले २०७४/७५ मा रू. ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजू पेश्कीतर्फ देखिएको छ । यस अवधिमा पेश्कीतर्फ रू. ५३ अर्ब ८८ करोड १४ लाख बेरुजू भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसमा संघीय सरकारी कार्यालयबाट रुजू नभई रू. ४५ अर्ब ४ करोड ८६ लाख बराबरको पेश्की भुक्तानी गरिएको देखिन्छ ।
यसैगरी महालेखाले कुल बेरुजू अन्तर्गत रू. ५१ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख बराबरको कारोबारलाई नियमित गर्नुपर्ने बताएको छ । सोअनुसार सम्बद्ध निकायले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर त्यस्ता कारोबारको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस अन्तर्गत आवश्यक कागजपत्र पेश नगरी रू. ३५ अर्ब २८ करोड ५५ लाख, शोधभर्ना नलिई रू. १ अर्ब ९ करोड ४ लाख बराबरको कारोबार भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
असुल गर्नुपर्ने बेरुजू घट्दै
संघीय सरकारी कार्यालयको हकमा पछिल्लो ३ वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजू घट्दै गएको छ । आव २०७३/७४ मा यस्तो बेरुजू रू. ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख थियो । हालसम्म आउँदा त्यसको परिमाण रू. ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाखमा झरेको छ । यद्यपि, यो अघिल्लो आवको तुलनामा बढी हो ।
यस्तै, असुल भएको बेरुजूको मात्रा भने बढ्दै गएको छ । २०७३/७४ मा रू. २ अर्ब ८ करोड ९७ लाख बराबरको बेरुजू असुल भएको थियो । यस अवधिमा रू. ९ अर्ब ७० करोड ४ लाख बराबरको बेरुजू असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा भने बढी हो ।